Judi Dench – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Tomorrow Never Dies (1997) Unicode ဒီ ဇာတ်ကားကတော့ မင်းသား Pierce Brosnan ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ဘွန်းဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်.. Pierce Brosnan ရဲ့ဘွန်းဇာတ်ကောင်ကို ပရိတ်သတ်တော်တော်များများနှစ်သက်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်... ကြင်အင်လက္ခဏာ...တည်ငြိမ်မှု..ဝတ်စားဆင်ယင်မှု..သရုပ်ဆောင်မှုတွေအရ Pierce Brosnan နဲ့ ဘွန်းကို တစ်ထပ်တည်းကိုက်ညီစေတဲ့ ရသကို ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့တာပါ.... နောက်တစ်ချက်က သူ့ရဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာ Action ပိုင်း အတော်လေး ပြည့်စုံတာကို တွေ့ရမှာပါ.. ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ အရှေ့တိုင်းရဲ့ နာမည်ကျော် မင်းသမီး မီရှဲယိုလဲပါဝင်ထားပါတယ်... IMDb Rating (6.5/10) ရရှိထားပါတယ်...။ Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Kaung Myat Hein ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi ဒီ ဇာတ္ကားကေတာ့ မင္းသား Pierce Brosnan ရဲ႕ ဒုတိယေျမာက္ဘြန္းဇာတ္ကားျဖစ္ပါတယ္.. Pierce Brosnan ရဲ႕ဘြန္းဇာတ္ေကာင္ကို ပရိတ္သတ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွစ္သက္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္... ၾကင္အင္လကၡဏာ...တည္ၿငိမ္မႈ..ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ..သ႐ုပ္ေဆာင္မႈေတြအရ Pierce Brosnan နဲ႔ ဘြန္းကို တစ္ထပ္တည္းကိုက္ညီေစတဲ့ ရသကို ေပးစြမ္းႏိုင္ခဲ့တာပါ.... ေနာက္တစ္ခ်က္က သူ႔ရဲ႕ဇာတ္ကားေတြမွာ Action ပိုင္း အေတာ္ေလး ျပည့္စုံတာကို ေတြ႕ရမွာပါ.. ဒီဇာတ္ကားမွာေတာ့ အေရွ႕တိုင္းရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ မင္းသမီး မီရွဲယိုလဲပါဝင္ထားပါတယ္... IMDb Rating ...
GoldenEye (1995) Unicode ဒီ ဇာတ်ကားကတော့ မင်းသား Pierce Brosnan ရဲ့ ပထမဆုံး ဂျိမ်းစ်ဘွန်းဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်..သူ့ရဲ့ ဘွန်းဇာတ်ကား ၄ ကားထဲမှာ Rating အမြင့်ဆုံးဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး လူသတ်မှုအများဆုံး ဘွန်းဇာတ်ကားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားပါ… Pierce Brosnan ရဲ့ဘွန်းဇာတ်ကောင်ကို ပရိတ်သတ်တော်တော်များများနှစ်သက်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်…ကြင်အင်လက္ခဏာ…တည်ငြိမ်မှု..ဝတ်စားဆင်ယင်မှု..သရုပ်ဆောင်မှုတွေအရPierce Brosnan နဲ့ ဘွန်းကို တစ်ထပ်တည်းကိုက်ညီစေတဲ့ ရသကို ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့တာပါ…. နောက်တစ်ချက်က သူ့ရဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာ Action ပိုင်း အတော်လေး ပြည့်စုံတာကို တွေ့ရမှာပါ..IMDb Rating (7.2/10) ရရှိထားပါတယ်…။ Credit Review Zawgyi ဒီ ဇာတ္ကားကေတာ့ မင္းသား Pierce Brosnan ရဲ႕ ပထမဆုံး ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းဇာတ္ကားျဖစ္ပါတယ္..သူ႔ရဲ႕ ဘြန္းဇာတ္ကား ၄ ကားထဲမွာ Rating အျမင့္ဆုံးဇာတ္ကားျဖစ္ၿပီး လူသတ္မႈအမ်ားဆုံး ဘြန္းဇာတ္ကားအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ထားတဲ့ဇာတ္ကားပါ… Pierce Brosnan ရဲ႕ဘြန္းဇာတ္ေကာင္ကို ပရိတ္သတ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွစ္သက္ေၾကာင္းေတြ႕ရပါတယ္…ၾကင္အင္လကၡဏာ…တည္ၿငိမ္မႈ..ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ..သ႐ုပ္ေဆာင္မႈေတြအရPierce Brosnan နဲ႔ ဘြန္းကို တစ္ထပ္တည္းကိုက္ညီေစတဲ့ ရသကို ေပးစြမ္းႏိုင္ခဲ့တာပါ…. ေနာက္တစ္ခ်က္က သူ႔ရဲ႕ဇာတ္ကားေတြမွာ ...